Vaovao - Vaovao tsara momba ny famolavolana aliminioma
Ny fampiasana hazo be dia be amin'ny fanamboarana an-tanàn-dehibe dia nahatonga ny fandringanana ala be loatra, fandotoana mavesatra ny fako, ary fanimbana lehibe ny tontolo iainana. Ny fampazana olona sy ny fampiharana ny rafitra bobongolo aluminium dia mahatonga ny fananganana trano ho tsara kokoa, haingana sy matanjaka kokoa, mifanaraka amin'ny fihenan'ny famoahana entona karbaona sy ny teknolojia fananganana maitso, ary zava-baovao lehibe eo amin'ny sehatry ny fananganana trano.
Manolo-tena izahay hampiroborobo ny fanovana sy ny fanavaozana ny indostrian'ny fananganana ary ny fanomezana vahaolana maitso ho an'ny fananganana tanàna. Ekipa R&D miaraka amina ivon-teknolojia orinasa fanta-pirenena sy manampahaizana momba ny fitantanana mankafy tambiny manokana avy amin'ny filankevi-panjakana, manaraka ny R&D sy ny fanavaozana ny vokatra bobongolo aluminium, ary mampiroborobo fatratra ny rafitra fisintomana. Ny rafitra firafitra alim-borona alimina voalohany an-trano dia ampiharina amin'ny tetikasa avo lenta, ary nahazo ny tsena eken'ny mpanjifa.
Manome serivisy famolavolana alim-pananganana alim-baravarankely matihanina momba ny aritrano izahay mba hahomby kokoa amin'ny fanamboarana ary hamokarana vokatra tsara kokoa miaraka amin'ny fikajiana vitsy kokoa. Namboarina trano maherin'ny arivo ary nahavaha olana indostrialy maro toa ny haavo avo, trano duplex, lakaly, trano fivoriambe vita prefabricated, ary lalantsara fantsona ambanin'ny tany
Ny fitantanana manara-penitra, ny fitantanana henjana ary ny fifehezana ny fizotran'ny asa tsirairay, mba hahazoana antoka fa ny vokatra dia aterina amin'ny kilema aotra.
Omeo alim-pito, fako formwork fanoloana substrate, tontonana mahazatra.
Ny orinasa fanodinana aliminioma dia nandalo ny fanamarinana ASI, fototra fanodinana aliminioma, fampiroboroboana ny fampandrosoana maitso sy maharitra ny indostria aluminium.
Amin'izao fotoana izao, ny vokatra sy ny serivisy dia manarona faritany 18 sy tanàna manerana ny firenena, ary aondrana any Azia atsimo atsinanana, afrika ary faritra hafa ampitan-dranomasina. Izy io dia nitombo haingana ho lasa orinasa teknolojia fananganana formwork tsara indrindra.
Amin'izao fotoana manokana izao, miaraka amin'ny fitaoman'i Corona amin'ny firenena rehetra. Manome vidiny manokana izahay hanampiana ny tsenan'ny asa fanarenana hody. Tongasoa amin-kafaliana ny fanontanianao.
Sifotra amin'ny fantsom-by vy, Scaffold Ringlock adidy mavesatra, Kwikstage Fitaovana fikolokoloana, Jack screw azo ovaina, Fizaran-tsarimihetsika Ringlock, Fehikibo Scaffolding Ringlock,